Xildhibaan Gama’diid oo sheegay inuu Maxkamad la tiigsanayo Xildhibaan Goodax – Kalfadhi
Xildhibaan Gama’diid oo sheegay inuu Maxkamad la tiigsanayo Xildhibaan Goodax
Baraha Bulshada Soomaalida ayaa waxaa qabsaday hadalka Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya, Xildhibaan Cabddullaahi Goodax Barre, kaas oo laga duubay muuqaal uu Al-Shabaab ku tilmaamayo Xildhibaan kale oo ka tirsan Golaha Shacabka, isaga oo dhex jooga Xarunta Golaha Shacabka shalay.
Inkasta oo ay jiraan dad sida uu qabo si u dhaw ku macneynaya dalabka Xildhibaannada qaar ay ku doonayaan inaan dadka laga qarin macluumaadka amaanka ee uu Goluhu ka doonayo Laanta Fullinta, oo ay dadka qaar u arkaan mid ay Al-Shabaab ka faa’iideysan karto, haddana waxaa jira in ay dad badan ku dhaliilayaan Wasiirka hadalkaas.
Xildhibaan Goodax, Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya, waxa uu yiri “Waa Shabaab – kanaa ka mid ah hadda sii socda – hala barto” isagoo markaas farta murugsatada midigta kusii fiiqaya Xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed (Gama’diid) oo agtiisa soo maray, mar uu Xarunta Golaha Shacabka kula hadlayey Muuqaal Baahiyaasha Soomaalida.
Wasiir Goodax waxaa hadalkiisa, oo u muuqan kara inuu Xildhibaanka uu farta ku fiiqay tusaale ugu soo qaadanayo inuu ka mid yahay Xildhibaanno kale oo, sida uu sheegay, u adeega Al-Shabaab, ay niyad-jabisay dad badan, sida laga dheehan karay qormooyin ay ku soo qoreen Barahaooda Bulshada.
Xildhibaan Gama’diid ayaa, isaga oo warbaahinta kala hadlaya arrinkaas, waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay inuu Wasiirka Waxbarashada, Goodax Barre, ku tilmaamay isaga Al-Shabaab. Waxa uu sheegay inuu ku hawlan yahay inuu Xildhibaan Goodax Barre ka dacweeyo maxkamad.
“Looyaro ama sharci-yaqaanno baan qabsaday, oo aan la tashtay” ayuu yiri Xildhibaan Gama’diid oo la hadlayey TV-ga Universal. “Sharcigaan la tiigsan doonaa, Goodax kama hari ndoono ilaa Xasaanadda Xildhibaannimo laga qaado, oo maxkamadda aan geyno” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Ishaysashada labada Xildhibaan waxay timid markii uu shalay Golaha Shacabka laba u kala qeybsamay: in taageertay in saxaafadda dibadda looga saaro Xarunta Golaha Shacabka iyo in diiday go’aankaas oo uu Guddoonka Goluhu sheegay in loo codeeyey.
Arrintaas waxay ka dambeysay ineysan dadku ogaan macluumaadka amaanka dalka oo ay Golaha uga xog warrami lahaayeen Wasiirka Amniga iyo Taliyayaasha Ciidanka, laakiin arrintaasi waa fashilantay shalay. Xildhibaanno fara badan ayaa arrintaas isaga hor yimid oo isku seegay, ilaa iyo haddana xal looma helin wali.
Golaha Aqalka Sare oo ka fekeraya shaqadiisa Kulanka 1-aad ee Golaha